အဲဗာတန်နှင့် လိဂ်ဖလားပွဲတွင် လူငယ်များကို နည်းပြကွန်တီ နေရာပေးမည်ဟု ဆို - Yangon Media Group
ချဲလ်ဆီးနည်းပြကွန်တီက လိဂ်ဖလားပြိုင်ပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ ပြိုင်ဘက် နည်းပြများဖြစ်သော ဂွါဒီယိုလာ၊ မော်ရင်ဟိုတို့နှင့် အမြင်တူသော်လည်း ပွဲကစားခွင့်မရသောကစားသမားများကို နေရာပေးသည့်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုအဖြစ် အသုံးချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ ဂွါဒီယိုလာနှင့်မော်ရင်ဟိုတို့သည် လိဂ်ဖလားပွဲအား စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စရာပြိုင်ပွဲတစ်ခုအဖြစ် ပြောဆိုထားခဲ့ရာ ၎င်းတို့ နှင့် အမြင်တူသော်လည်း တစ်ချိန်တည်းတွင် လိဂ်ဖလားပွဲအား လူငယ်များကို အခွင့်အရေးပေးသည့် ပြိုင်ပွဲအဖြစ် ရှုမြင်ထားကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
ချဲလ်ဆီးသည် ပြိုင်ပွဲအရပ်ရပ်တွင် သုံးပွဲဆက်တိုက်နိုင်ပွဲ ပျောက်ဆုံးခဲ့ပြီး နောက် ဝက်ဖို့ဒ်ကို အနိုင်ယူကာ နိုင်ပွဲ ပြန်ရှာနိုင်ခဲ့အပြီးတွင် လာမည့်လိဂ်ဖလား ပွဲစဉ်၌ အဲဗာတန်နှင့် ရင်ဆိုင်ကစားရမည် ဖြစ်သည်။ ကွန်တီက ”ကျွန်တော့်အနေနဲ့ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ဆန်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် လိဂ်ဖလားနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဂွါဒီယိုလာ၊ မော်ရင်ဟိုတို့နဲ့ အမြင်တူတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုပြိုင်ပွဲမျိုးဟာ လုံလောက်တဲ့ပွဲကစားခွင့်မရတဲ့ ကစားသမားတွေရဲ့ ခြေစွမ်းတိုးတက်မှုအတွက် အခွင့်အရေးအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဗာတန်နဲ့ကစားရမယ့် လိဂ်ဖလားပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒရင့်ဝါးတား၊ ကန်တီနဲ့ မိုဆက်စ်တို့ ပြန်ကစားနိုင်ဦးမှာ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ဒီလိုအချိန်မှာ မူဆွန်ဒါ၊ ကနေဒီစတဲ့ လူငယ်ကစားသမားတွေအတွက် ပွဲကစားခွင့်ရဖို့ထိုက်တန်ပါတယ်”ဟုဆိုခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင် ကွန်တီက မိမိမှာ ယခင်ချဲလ်ဆီးနည်းပြဟောင်းများနှင့် ကွဲပြားခြားနားသူဖြစ်ခြင်း ကြောင့် ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခံရမည်ကို မည်သည့်အခါကမျှ စိုးရိမ်ခြင်းမရှိခဲ့ ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ကွန်တီသည် အသင်းနှင့်ပွဲဦး ထွက်ရာသီတွင် ချဲလ်ဆီးအား ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဆု ရယူပေးနိုင်ခဲ့သော်လည်း ထိပ်ဆုံးမှ မန်စီးတီးနှင့် ကိုးမှတ်အထိကွာဟနေရာ ဆုဖလားအောင်မြင်မှုထပ်မရပါက ကွန်တီအနေဖြင့် ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခံရနိုင်ကြောင်း သုံးသပ်မှုများရှိနေသည်။ သို့ရာတွင် ကွန်တီက ”ကျွန်တော်က အရင်ချဲလ်ဆီးနည်းပြတွေနဲ့ ကွဲပြားသူဖြစ်လို့ ရာထူး က ထုတ်ပယ်ခံရမှာကို စိုးရိမ်နေမယ့်သူမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်အစွမ်းကုန်ပေးဆပ်လုပ်ဆောင် နေတဲ့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ကိုယ့်အလုပ် အပေါ်မှာရော၊ ကစားသမားတွေအ ပေါ်မှာပါ ယုံကြည်မှုရှိထားပါတယ်။ ပရိသတ်တွေ၊ ကစားသမားတွေနဲ့ အသင်းအတွက် ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အမြဲဆန်းစစ်နေ ခြင်းကသာ ကျွန်တော့်အတွက် ဖိအားလို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်”ဟုဆိုခဲ့သည်။
သီတဂူ ဆရာတော်ကြီးမိန့်ကြားချက်အရ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစည်တော်ကြီးကို ကောင်းမှုတော်စေတီတော်ရင်ြ??
၂ဝ၂ဝ အမေရိကန်သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဟာဝိုင်အီ ဒီမိုကရက်တစ် အောက်လွှတ်တော်အမတ် ဂတ်ဗတ် ဝင်ရော??